]Ndị na-emepụta ngwá ụlọ na-emepụta igwe & ndị na-enye igwe igwe | Ụlọ ọrụ Shangrui
Ị ka na-echegbu onwe gị na ị gaghị achọta ezigbo ngwá ọrụ mmepụta ihe maka panel na ngwá ụlọ osisi siri ike?
Igwe Shangrui na-enye gị ahụmịhe ọrụ dị iche. Anyị na-emeziwanye teknụzụ anyị mgbe niile ma na-eme ka ngwaahịa anyị dị mma ka ị nwee ike iji igwe na-emepụta arịa ụlọ ka mma. N'ihi na ị na-egwu na ọkachamara panel ngwá ụlọ. Igwe anyị (dị ka igwe a na-ebi akwụkwọ) nwere ike ịme kabinet, desks, akwa akwa, tebụl iri nri maka gị. Ọ bụrụhaala na ị nwere mkpa, anyị nwere ndị injinia ọkachamara ga-edozi ha maka gị.
Shangrui igwe ọkachamara mmepụta nke dị iche iche nke panel na osisi siri ike mmepụta ngwá ọrụ, dị ka dị iche iche mkpa nke ndị ahịa imewe na mmepụta nke na-abụghị ọkọlọtọ ígwè.
]ahaziri Okpokoro nha Reciprocating saw trimming saw machine.
]Ahụhụ Multi-Blade maka ngwaahịa Shangrui na ngwa ọrụ.
ahaziri ebuli n'elu ikpo okwu wiring ọrụ nke dị iche iche ụlọ mmepụta ihe
]A na-eji ikpo okwu na-ebuli elu eme ihe maka ọrụ wiring nke ụlọ ọrụ dị iche iche. Ọ nwere ngwa wiring nke ibuli n'ihu na iwetu azụ azụ, a pụkwara iji ya mee ihe n'onwe ya iji kwado njikwa ihe nhazi. Na-ebelata oke ọrụ nke ndị ọrụIbu ibu, weta mma ibu ọrụ. Ọ na-adabara maka mmepụta uka nke ígwè ọrụ osisi dị iche iche. Ọ bụ ihe enyemaka dị mkpa maka nnukwu ụlọ mmepụta ihe.
]Shangrui Machinery Co., Ltd. ọkachamara anọ-akụkụ hụrụ MSJ3315X50 emepụta, Professional mmepụta nke a dịgasị iche iche nke panel na osisi siri ike ngwá ụlọ mmepụta ngwá ọrụ, dị ka dị iche iche mkpa nke ndị ahịa imewe na mmepụta nke na-abụghị ọkọlọtọ ígwè.